MANANARA AVARATRA : Tovolahy iray namoy ny ainy, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Manao tohivakana ny vono olona amin’ny fomba feno habibiana any amin’ny Faritra maro eto amintsika tato ho ato. 22 janvier 2020
Ao ireo vehivavy sahy mifofo ny aim-badiny amin’ny fomba mahatsiravina noho ny fijangajangana tafahoatra loatra, vao tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo iny ihany koa ny nahafatesan’ilay zazavavikely miisa roa nopoizinin-dreniny ka maty tsy tra-drano. Manginy fotsiny ireo faty hita etsy sy eroa.
Raha ny angom-baovao voaray omaly izao dia nahazoana tatitra mahakasika vono olona tamin’ny fomba nampiahiahy tao Mananara Avaratra. Tovolahy iray avy any Maroantsetra ka tonga nivantana tao Mananara ny alatsinainy lasa teo no nisy namono, marihana moa fa ny rainy niteraka azy ihany no nipetraka tao Mananara. Araka ny fanazavana voaray hatrany dia karazany ho alatsinainy alina ity farany no nisy nifofo ny ainy, ny talata maraina vao hitan’ny rehetra teo amin’ny manodidina ny razana.
Rehefa natao ny fizahana dia feno ratra ny vatany, nivoaka ra sahala amin’ny notsondromina tamin’ny antsy ny fahitana azy, hoy ireo nanatri-maso. Tsy fantatra mazava kosa hatreto ireto nahavanon-doza, tsy fantatra ny olana nahatonga izao, eo am-panatanterahana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana ankehitriny. Nisy nilaza moa ireo nahafantatra azy fa nikasa hiakatra any Antananarivo renivohitra izy io saingy izao nindaosin’ny fahafatesana izao.